HomeTurkeyMpaghara Marmara54 SakaryaỌrụ ụgbọ okporo ígwè mba na TÜVASAŞ
13 / 01 / 2020 54 Sakarya, ụgbọ okporo ígwè, General, oru, Isi akụkọ, Mpaghara Marmara, Tüvasas, Turkey
tuvasasta mba train train
Turkey n'ụgbọala Industry Inc. National Electric Train mkpọsa na oru. Factorylọ ọrụ ahụ ga-eme ngwa ọrụ ya ma ndị ọrụ ga na-arụ ọrụ ugbu a na Satọde. A na-eme atụmatụ iji ụgbọ oloko a na-agafe n'okporo ụzọ na njedebe nke June ma ọ bụ July.
Turkey n'ụgbọala ụlọ ọrụ dị ka (TÜVASAŞ), ndị mba ọzọ ụlọ ọrụ nke na ọ nwere ihe ọmụma site dizel oloko usoro mmepụta n'okpuru ikike, e bu n'uche ka a ga-eji na mmepụta nke mba electric ụgbọ okporo ígwè tent.
Usoro ụgbọ ala eletriki eletrik nke 160 kilomita kwa elekere n'ime mmepụta nke ụdị a na-ele anya ga-agwụcha tupu etiti afọ a ma ebido ibudata ụgbọ ahụ na ụgbọ elu.
A na-atụ anya na usoro ule na asambodo nke usoro ụgbọ oloko a ga-agwụ tupu ngwụcha afọ a ka mmepụta ihe amalite.
Na mgbakwunye, usoro ọzụzụ ụgbọ ala eletrik emepụtara ma amalitela usoro ụgbọ elu dị elu ka atọrọ ya kwekọrọ na 225 km / h iji wee jiri ya mee ihe n'ọmụmụ R & D.
A ga-arụcha ọrụ nhazi nke okporo ala eletrik na mba na-abịa.
TUBITAK ga-ahazi ọrụ R & D nke oru ngo a wee mepụta akụrụngwa ndị dị oke mkpa na ọkwa dị egwu. A ga-ebido ịmalite ọmụmụ a nke mpaghara eletriki eletrik na mba 2022 na usoro ụgbọ oloko dị elu nke mba ahụ na 2023.
Electricgbọ ala eletrik ga-akụ ụzọ ndị ahụ n’afọ 2020
Elektrikli Anyị na-ahụ okporo ụzọ ụgbọ okporo ígwè anyị dịka otu n'ime ụzọ kachasị mkpa nke mmegide mmepe siri ike, Cah kwuru Cahit Turhan, Mịnịsta nke Transportgbọ njem maka ụbọchị nke National train Train National.
Mehmet Cahit Turhan kwuru, tik Anyị rụsiri ọrụ ike iji tụte mpaghara a na-eleghara anya ruo ọtụtụ afọ. N'okpuru onye isi ala anyị, anyị agbanweela ụzọ okporo ụzọ anyị gaa na steeti iwu. Anyị rụgharịrịrịrị ụzọ dị mkpa nke dị n’ọdụ ụgbọ elu 11 km anyị dị ugbu a. N'ime usoro nke iwu anyị mere, anyị emepeela ụzọ ụgbọ oloko maka nkeonwe. Anyị edozila usoro iwu maka ịkwọ ụgbọ mmiri na ndị njem site na ụgbọ oloko nke ngalaba nke onwe na netwọk okporo ụzọ anyị. 590. Anyị mere okporo ụzọ ụgbọ elu dị ọsọ 1.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nde njem 52 mere na ụzọ Ankara-Eskişehir-Istanbul, Ankara-Konya-Istanbul. Anyị mepụtala akụkụ dị mkpa nke ihe ụgbọ oloko dị elu na mba nke anyị. Anyị mepụtara ụgbọ ala nke na-ebu ibu, anyị na-eji ya. Na 2020, anyị bu n’obi iburu 9,8.T nde ndị njem na-ebugharị YHT.
CDgbọ njem TCDD Co. 29,3 nde tọn, nde 5,5 site na ndị ọrụ ụgbọ okporo ígwè nkeonwe, gụnyere ngụkọta nke nde 34,8 nke ụgbọ mmiri ezubere iche. Marmaray bufere ndị njem nde 2020 n’afọ 146.
Anyị tụrụ anya na ihe ruru nde 14,6 ga-ebufe na Ba2020kentray. Na TÜVASAŞ, anyị ga-ebelata ụzọ izizi National Electric Train Set ka ụgbọ okporo ígwè na XNUMX wee malite imepụta oke. (Medyab bụ)
Ọrụ Egwuregwu na Kargı Obodo
Ọrụ European maka Ụlọ Egwuregwu Ememe Emepe na Erzurum
112 Ọrụ Mgbochi Mberede Mberede na Uludag
Marmaray Tempon Höyüğü amalitere ngbanwe ya
Ọdụdọ Ordu na-eme ka ntụgharị nke snow
Minista nke uhie si İZBAN
Trolleybus Mesaisi na obodo Manisa Metropolitan
Njedebe nke ụgbọ oloko ahụ kwụsịrị engineer kwụsịrị
Capital President Kocaoglu awa nke kpụ ọkụ n'ọnụ Omenala
Ndị ọrụ ugbo na Elazığ
Nbudata n'abalị na Konak Tram
Newferikte Uludag New Year na Night Mesaisi
Ntughari na-aga n'ihu na Çorum
Ọdụ ụgbọ ala National
na-eji elekota eletrik eletrik
mmeputa ugboala nke ala eletrik
Ụlọ Egwuregwu Nkụzi Mba
Usoro Ọganihu Dị Elu
A ga-eme nnyocha maka Sakarya Nostalgic Tram!